अनावश्यक रुपमा दुखी बनाउने कुराहरु के के हो त ? कसरी छुटकारा पाउने ? जान्नुहोस - Sakaratmak Soch
अनावश्यक रुपमा दुखी बनाउने कुराहरु के के हो त ? कसरी छुटकारा पाउने ? जान्नुहोस
मानिसहरु भौतिक कुराले मात्र खुसी बन्न सकिन्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्दछन् । यस्तो धारणाले गर्दा पनि उनीहरु खुसी हुन सक्दैनन् । किनकि खुसी भनेको भौतिक सेवा सुविधाले सम्पन्न हुदा मात्र आउने कुरा होइन । यदि तपाई सग पैसा छैन तर एउटा राम्रो मन छ, जुन मनले तपाईलाई सबै सग मिलेर बस्ने, हास्ने, कुरा गर्ने भनेर अराउदछ भने, तपाईलाई खुसी हुनका लागी कहिँ पनि जानु पर्ने आवश्यक हुदैन ।
संसारमा हरेक व्यक्ति खुसी हुन चाहन्छ तर उसलाई केहि न केहि कुराले एकदमै पिरली रहेको हुन्छ । किनकि मान्छेको आवश्यकता जति पुरा हुदै गयो. त्यतिनै उसको इच्छा पनि बढ्दै जाने गर्छ । खुसी भन्ने कुरा अन्त खोजेर वा मागेर पाउने चिज होइन । आफु खुसी हुने कि दुखी हुने भन्ने सबै कुरा तपाई आफुमा नै निर्भर रहने गर्दछ ।
आउनुहोस् तपाईलाई के-के कुराहरुले दुखी बनाउने गर्छ, जानौ
१. यदि तपाई आफुले गरेको गल्तीलाई बारम्बार याद गरिरहनुहुन्छ भने त्यो कुराले तपईलाई झनै दुखी बनाउने गर्दछ । जीवनमा सानातिना गल्तिहरु त हुनेनै गर्छन् त्यसैले त्यस्ता गल्तीलाई बिर्सिदिने गर्नुहोस । आफुले आफुलाई माफी दिन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि गल्तीबाट केहि सिक्ने र त्यो गल्तीलाई नदोहोर्याउने प्रण गर्नुपर्छ । गल्ति हरेक व्यक्तिले गर्छ । केहि गर्न खोज्ने व्यक्तिके गल्तीबाट पनि सिकिरहेको हुन्छ ।
२. कुनै पनि काम गर्दा त्यसको प्रक्रिया भन्दा नतिजालाई बढी महत्व दिन थाल्नु भयो भने पनि तपाईलाई एकदमै दुखी बनाउने काम गर्छ । नतिजा जास्तोसुकै होस्, आफुले गरेको कामको प्रक्रियालाई बढी महत्व दिने गर्नुहोस । सफलता भनेको नतिजा होइन, प्रक्रिया हो । सफलताको रहस्य भएको प्रदर्शन गर्नुभन्दा अगाडी पर्दा पछाडिको तयारी हो । त्यसैले नतिजालाई भन्दा सधै प्रक्रियालाई महत्व दिनुपर्छ । नतिजा अपेक्षा गरे अनुरुप आएन भने प्रक्रियालाई फेरी मुल्यांकन गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
३. सबैभन्दा सुरुमा त तपाइलाई आफै प्रति बिश्वास हुनु पर्दछ । यदि तपईलाई आफूप्रति बिश्वास नै छैन भने तपाइँ सधै अरुभन्दा पछाडी छू र म कहिल्यै अघि बढ्न सक्दिन भन्ने रहन्छ । त्यसैले आफुमा बिश्वास गर्नुहोस् । आफुलाई अरुसंग तुलना नगर्नुहोस । तपाइको क्षमता के हो, तपाईले के र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सुरु गर्नुहोस । हरेक मान्छे आफ्नो जिन्दगीमा त्यसरीनै लडिरहेको हुन्छ, जसरी तपाई लडिरहनु भएको छ । फरक यति मात्र हो कि, तपाईले आफ्नो संघर्षलाई महशुस गर्न सक्नुहुन्छ, तर अरुको संघर्सलाई महशुस गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले आफुलाई पिडित देखाउन पनि छोड्नुहोस् । तपाई भाग्यमानी हुनुन्छ, तपाई संग भएका कतिपय कुराहरु अरु मानिसहरु संग छैन ।
४. अरुको इर्ष्या गर्ने बानीले पनि तपईलाई अनावश्यक रुपमा दुखी बनाउने गर्छ । अरुको सफलतामा पनि खुसी हुन सिक्नुहोस तब तपाई कहिल्यै दुखी हुनु पर्दैन । अरुको इर्ष्या गर्ने बानीले आफुलाई नै भित्र भित्रै नष्ट गरिरहेको हुन्छ । इर्ष्या गर्नुको साटो अरुको प्रसंसा गर्न सिक्नुहोस । काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस ।
५. आफ्नो हरेक दिनलाई बिजी राखीरहनु भयो भने पनि तपाई दुखी बन्ने गर्नुहुन्छ । त्यसैले थोरै समय निकालेर भए पनि दिमागलाई मनोरञ्जन दिलाउनुहोस । संगीत सुन्नुहोस, चिसो हावामा बस्नुहोस । समय तालीका बनाएर हुड्ने गर्नुहोस । समयले कसैलाई पनि पर्खदैन । अस्तव्यस्त होइन, व्यस्त बन्नुहोस । समयको सदुपयोग गरेर, जति व्यस्त बन्नुहुन्छ, त्यतिनै तपाईका नकारात्मक सोंच, डर हट्दै जान्छन् ।
६. यदि तपाई बितिसकेको कुरालाई पनि संगसगै लिएर हिड्नुहुन्छ भने पनि त्यसले तपाईलाई दुखी बनाउने गर्छ । बितिसकेको कुरालाई लिएर आफ्नो बर्तमानलाइ नमार्नुहोस ।त्यसैले जे कुरा बित्यो त्यो अब फर्केर आउने छैन, त्यसैले बर्तमानमा रमाउन सिक्नुहोस । बिगतमा अल्झिएर बस्ने व्यक्ति सधै दुखी रहिरहन्छ । परिवारको कुनै सदस्यको निधन भएपछी पनि त्यो परिवार अगाडी बढिरहन्छ । आकाशको तारा झरे पनि अन्य तारा चम्किरहेका हुन्छन् । भोली सुर्य उदाउछ नै, रात परेर सधै रात मात्रै रहिरहदैन । हिजोको रातलाई सम्झेर बसिरहने हो भने आजको दिन यत्तिकै खेर जान्छ । हिजोको दिनलाई सम्झेर रमाएर बस्ने हो भने आज खेर फालेको समयले दुख निम्त्याउन सक्छ ।
७. कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी बिश्वास गर्ने बानीले गर्दा पनि मानिसहरु दुखी हुने गर्दछन् । भाग्य रेखा बदल्ने काम तपाईको हातमा छ त्यसैले भाग्यमा होइन कर्ममा बिश्वास गर्ने गर्नुहोस । मान्छेको भाग्य त्यतिनै नजिक आउछ, जति हामीले मेहेनत गर्छौ । मेहेनत र तयारीमा समय दियौ भने अवसर मिल्दा जादु बन्नसक्छ । तर व्यक्तिले भाग्य छैन भनेर बसिरह्यो भने अवसर आउदा उसले आफ्नोतर्फ बाट केहि पनि गर्न सक्दैन । त्यसपछि ऊ सधैको दुखिनै बनिरहन्छ ।
८. अनावश्यक रुपमा फेसबुकको प्रयोग गरेर आफ्नो समय खेर फाल्ने बानीले तपईलाई दुखी बनाउने गर्छ । खाली समय हुदा फेसबुकको प्रयोग गर्नुको सट्टा कुनै काम गर्नुहोस जुन काम गर्दा तपईलाई भविष्यमा सफल हुनको लागी सहयोग मिल्छ । टेलिभिजन सिरियल र सामाजिक संजालमा बढी समय बिताउदा उत्पादनशील समय खेर गईरहेको हुन्छ । यसका साथै नकारात्मक सोचहरु ओअनी उत्पन्न हुन थाल्छन् र व्यक्ति दुखी बन्छ । टेलिभिजन र सामाजिक संजाललाई केहि निश्चित समय मात्र दिनुपर्छ । पत्रपत्रिका पढ्ने, बर्तमान घटनाक्रमसंग अपडेट रहने, पुस्तक पढ्ने, प्रेरणादायी कुरा पढ्ने तथा हेर्ने, कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गर्नुपर्छ ।
९. काम गर्दा पनि आराम नगरिकन एकहोरो काम गरिरहनु भयो भने पनि त्यसले तपाईलाई दुखि बनाउछ । किनकि एकछिनको जोसले तपाइँ काम त गर्नुहोला तर शरीरलाई आराम नहुदा भोलीपल्ट देखि तपाइको काममा ढिलासुस्ती आउने गर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत समय ननिकाली काममा लागिरह्यौ भने त्यसले हामीलाई दिमागमा दबाब बढ्छ, जसले गर्दा हामी दुखी बन्छौ ।त्यसले आफ्नो लागि समय निकाल्ने, हप्तामा कम्तिमा एकदिन बिदामा बस्ने, परिवारसंग समय बिताउने गरनुपर्छ ।
One thought on “अनावश्यक रुपमा दुखी बनाउने कुराहरु के के हो त ? कसरी छुटकारा पाउने ? जान्नुहोस”
Delek March 8, 2020 at 1:12 pm · Edit
Faceboo nahernu vannu hunxa facebook herera tapaiko sabda haru padnu pako xa.. sahi kura padnu parxa samajik sanjal bata